Daawo Cabsi wadnaha Farta lagu hayo oo ka jirta Yurub (halis cusub) - iftineducation.com
iftineducation.com – Amaanka magaalooyinka ku yaala dalalka Yurub ayaa si aad ah loo adkeeyay ka dib weerarkii dhimashada iyo dhaawaca dhaliyay ee ka dhacay magaalada Paris see caasimada dalka Faransiiska.
Ciidamo ilaalo ah ayaa lagu xoojiyay goobaha dadka ay isugu yimaadaan ee ku yaalo magaalooyinka Yurub sida dalka Britain oo amaanka si aad ah loo adkeeyay ka dib markii cabsi laga muujiyay weerarkii Baris.
Wariye Max’ed Maxamuud Dhoore oo ku sugan dalka Britain ayaa soo sheegaya in dhacdadii Paaris warbaahinta reer galbeedka si aad ah u hadal hayaan,isagoona sheegay inaysan saameyn ku yeelan karto muslimiinta qaarada Yurub ku nool.
Wuxuu sheegay Dhoore in Ciidamo si gaar ah u tababaran la geeyay wadooyinka dhulka hoostiisa ee ku yaalo Britain kuwaasi oo Tareenada ay maraan,waxaana ujeedka Ciidamada loogu xoojiyay lagu sheegay inay laga hortago weeraro la mid ah kii Baris halkaasi uu ka dhaco.
Wakaalada wararka AFP,ayaa sheegtay in dhibaatooyin kala duwan ay la kulmeen muslimiinta ku nool Faransiiska weerarkii dalka Faransiiska ka dib.
XOG: Taliye muhiim u ahaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay Dowlada (Magaca)